Tantaram-piainana – Kamboty ray sy reny sady indroa voalona i Seheno saingy afa-panadinana CEPE - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Tantaram-piainana – Kamboty ray sy reny sady indroa voalona i Seheno saingy afa-panadinana CEPE
Fiainana mangidy. Nandalo olana sy fisedrana maro Ralaiarivony Seheno, 14 taona, teo amin’ny fiainana. Mbola kely izy dia efa kamboty ray, ary ny reniny irery no namelona azy enina mianadahy. Tsy nahakivy azy anefa izany fa vao mainka nisikim-ponitra izy, ary fanambiny ny ho tafita amin’ny fianarana. « Niharan’ny fanolanana izy teo amin’ny faha- 12 taonany, ary tena nisy fiantraikany lehibe teo amin’ny sainy mihitsy izany », araka ny fitantaran-dRakotonirina Harivololona, talen’ny akany Tsaramanasoa, izay mandray an-tanana azy amin’izao fotoana izao.
Tao amin’io akany fitaizana io izy no nianatra tamin’izany. Tompon’andraikitry ny fandriampahalemana teny amin’ny fokontany nisy azy ihany no nanolana ity zaza ity. Niakatra teny anivon’ny Fitsarana ny raharaha izay nitarika aretina sy alahelo ary tebiteby teo amin’ny reniny. « Ny andro nivoahan’ny didy anefa dia maty tampoka indray ny reniny », hoy ny fitantaran’ny havany. Ilay nambara fa nanolana azy kosa lasa nigadra eny Tsiafahy.
Valifaty nahatsara zavatra
Niteraka alahelo sy ratram-po mafy teo amin’ny fiainan’i Seheno izany rehetra izany. « Tsy maintsy narahina akaiky ny fitaizana ara-psykolojiany satria indroa niharan’ny fanolanana izy. Narahina asam-pifohazana mihitsy izany vao tena natanja-tsaina i Seheno », hoy hatrany Rakotonirina Harivololona
Nipetraka ihany koa nanomboka teo ny alahelon’ireo fianankavian’ilay lehilahy nambara fa nanolana. « Saika nisy mihitsy ny valifaty; ary tsy maintsy nafindra monina i Seheno », raha ny fitantaran’ny havany. Ny akany Tsaramanasoa etsy Itaosy no nandray an-tanana azy tamin’ny lafiny rehetra. Ny akany no nampianatra sy nitaiza azy ary isan’ireo ankizy afaka ny fanadinana Cepe teo i Seheno, roa taona taty aorian’ny fahavoazany. « Ny ho lasa mpitsabo no tena faniriako ary isaorako ny akany nitaiza ahy ho toy ny zanany », hoy izy.
CEPE, Mpanoratra Rijakely, 20.08.2012, 09:26	FIARAHAMONINA